Mari-nehupfumi, 01 Ndira 2018
Muvhuro 1 Ndira 2018
Ndira 01, 2018
Vanhu Vanoshanyira Mapako eChinhoyi Caves
Vanhu vabvakachira mapako emuChinhoyi vanga vachiita zvakasiyana siyana zvinosanganisira kuona dziva riri mumapako rinonzi Fallen Pool iro rinonzi rinoera, kushambira pamwe nekufara vachigocha nyama nekudya twunonaka.
Amai Mujuru Vanoti Hurumende yaVaMnangagwa Haina Kusiyana neyaVaMugabe
Amai Mujuru vanoti ivo nebato ravo pamwe nemubatanidzwa wemapato anopikisa, wePeoples Rainbow Coalition, vacharamaba vachirwisa bato reZanu PF kuitira kuti munyika muve neshanduko chaiyo kwete shanduko yekubata vanhu kumeso.
Mapato Anopikisa Otaura Pamusoro peBasa Idzva raVaChiwenga
Vemapato anopikisa vanoti havana kunyanyoshamiswa nevanhu vakadomwa nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, kuti vave vatevedzeri vavo muhurumende. Mashoko aya anotevera kutoreswa mhiko kwaitwa Retired General Constantino Chiwenga na Kembo Mohadi yekuva vatevedzeri vaVaMnangagwa.
Vagari vakawanda vekuMasvingo vanoti vanotarisira kuti hupenyu hwavo huchashanduka mugore idzva ravatarisana navo, sezvo zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka mugore ra 2017.
Zvita 27, 2017
Tsaona dzeMumigwagwa Dzotora Hupenyu hweVanhu Vakawanda Munguva yeZororo
Sangano rakazvimiririra richiona nezvekufamba zvakanaka kwedzimotokari zvisina njodzi mumigwagwa, re traffic safety council of zimbabwe, rinoti harisi kufara nehuwandu hwevanhu vafa munjodzi dzemumigwagwa panguva yezororo re kisimisi.
Vanotyaira Magonyeti Votakura Zvinodhaka?
Sangano rinoona nezvemotokari dzinotakura zvinorema reTransport Operators Association of Zimbabwe,TOAZ, rinoti riri kushushikana zvikuru nevatyairi vari kutakura zvinodhaka, uye rakatosungisa vamwe vatyairi gumi nevashanu pazororo rekisimusi.
Vari Kunze kweNyika Votarisira Kuzadzisirwa Kodzero Dzavo Muna 2018
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kurumbidzwa zvikuru nekubatsira kuti nyika isagwadama munyaya dzezveupfumi kuburikidza nemari yazvinotumira kumusha, iyo iri kuraramisa mhuri dzakawanda munguva yekuoma kwezvinhu kudai.
Zvita 26, 2017
Vateereri veStudio7 Voshuvira Gore Idzva Richange Riri Nani
Zvizvarwa zvizhinji zvekuZimbabwe zviri kunze kwenyika zvine tarisiro yekuti gore rinouya richange ririnani kupfuura makore apfuura.
Kushaikwa kweMari kuMabhanga Kunokanganisa Kisimusi yeVakawanda
Kukwirawo kwemitengo yezvinhu zvakawanda zvinodiwa nevanhu zuva nezuva ndechimwe chezvinhu zvinonziwo zvakakonzera kuti Kisimusi yegore rino ibva yanyanya kudzikira kana zvichienzaniswa nemamwe makore.
Vamwe Voramba Kubhadhara Mitero kuKanzuru yeGutu Rural Council
Kanzura weWard 27 kwaGutu, Alderman Jeffreys Tangemhare, vanoti vanhu vakawanda munzvimbo yavanomirira havachadi kubhadhara mitero kunzuru nekuti vave nenguva yakareba vasina rutabatsiro rwavanowana kubva kunzuru iyi.
Vagari Vofarira Chirongwa cheMapurisa Chinochengetedza Nharaunda Dzavo muChinhoyi
Gore rino mapurisa ari kufamba mudzimba vachitaurira vagari kuti vasasiye dzimba dzisina vanhu ivo vachienda kuzororo pamwe nekukiya mikova yedzimba nguva dzemanheru kuti vasabirwe nematsotsi.
Zvita 25, 2017
Varume Vanonzi Havafarire Kuronga Mhuri
Mushandi kuZimbabwe National Family Planning Council, VaDennis Mlambo, vanoti kunyange hazvo vachikurudzira kuti vanoda kuronga mhuri vauye vari vose murume nemukadzi, varume vashoma vari kupinda munyaya dzekuronga mhuri.